ပြည်သူ များ အားကိုးတဲ NUG Technology နည်းပညာ ကိုယ်ပျောက် Drone၊…..မိုင်၁၂၀ ထိ ရောက်ရှိ နိုင်ပြီး ၊ ၄၈ နာရီ ထိသုံးပြုနိုင် – OK MEDIA
ပြည်သူ များ အားကိုးတဲ NUG Technology နည်းပညာ ကိုယ်ပျောက် Drone၊…..မိုင်၁၂၀ ထိ ရောက်ရှိ နိုင်ပြီး ၊ ၄၈ နာရီ ထိသုံးပြုနိုင်
January 10, 2022 adminLeaveaComment on ပြည်သူ များ အားကိုးတဲ NUG Technology နည်းပညာ ကိုယ်ပျောက် Drone၊…..မိုင်၁၂၀ ထိ ရောက်ရှိ နိုင်ပြီး ၊ ၄၈ နာရီ ထိသုံးပြုနိုင်
ပွညျသူ မြား အားကိုးတဲ NUG Technology နညျးပညာ ကိုယျပြောကျ Drone၊…..မိုငျ၁၂၀ ထိ ရောကျရှိ နိုငျပွီး ၊ ၄၈ နာရီ ထိသုံးပွုနိုငျ
ယနေ့ တမူးမွို့ တမူးခရိုငျ အတှငျး လေ့လာရေး ဖွဈရောကျရှိလာတဲ့ ပွညျသူ မြား အားကိုးတဲ NUG technology နညျးပညာ ကိုယျပြောကျ drone၊…..မိုငျ၁၂၀ ထိ ရောကျရှိ နိုငျပွီး ၊ ၄၈ နာရီ ထိသုံးပွုနိုငျ တဲ နောကျဆုံးပေါျ drone.
အရေးတောျပုံ အောငျ ကို အောငျရ တော့မညျ။
ယနေ့ တမူးမြို့ တမူးခရိုင် အတွင်း လေ့လာရေး ဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့ ပြည်သူ များ အားကိုးတဲ NUG technology နည်းပညာ ကိုယ်ပျောက် drone၊…..မိုင်၁၂၀ ထိ ရောက်ရှိ နိုင်ပြီး ၊ ၄၈ နာရီ ထိသုံးပြုနိုင် တဲ နောက်ဆုံးပေါ် drone.
အရေးတော်ပုံ အောင် ကို အောင်ရ တော့မည်။
Myanmar Net အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ကုန်သွယ်ခွန်တိုးမြှင့်မှုကြောင့် လစဥ်အင်တာနက်နှုန်းထားများ တိုးမြှင့်ဟုထုတ်ပြန်
အားလုံးရဲ့အမေ မကြာခင်လွတ်တော့မည် ဒီရှေ့နေကြီးပြောပြီ ဗွီဒီယိုရုပ်သံ
အမေရိကန်ရဲ့ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းဖြစ်နေစေတဲ့လက်နက်စနစ် ၅ မျိုး
မန္တလေး သူနာပြု လင်မယားအတွက် စစ်ကောင်စီ လျော်ကြေးပေးတောင်းပန်
တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူ့အပေါ် သစ္စာစောင့်သိကြမယ့် တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေပါ ဆိုတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်သရုပ်ဆောင် ကိုမြဖြိုးကို… January 20, 2022
“အလိုမရှိ”သီချင်းဖွင့်ထားခဲ့၍ စစ်ကောင်စီတပ်များ ပြာယာခတ်ကာ လိုက်ရှာနေ(ရုပ်သံ) January 20, 2022
ဇော်မဲလုံး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဟန်လုပ်ပြီး ညာ ထားသမျှ ပေါ်ကုန်ပြီ…. January 20, 2022
ဘယ်ကောင် ‌သေရဲလဲဆိုတဲ့ကောင်တေက “ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ”ကိုထပ်နေတာပဲ (ရုပ်/သံ) January 20, 2022
လွိုင်ကော်မှာ စခတွေကို PDF တွေဘယ်လိုမျှားခေါ်နေလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ဦး January 20, 2022
ပြည် သူ ၄၀၀၀၀၀ အကူအညီ နဲ့ ဒေါ က် တာ ဆာ ဆာ အောင် မြင်ခဲ့ပြီ ဂုဏ်ယူပါတယ်
မကြာခင်လွတ်တော့မည် ဒီရှေ့နေကြီးပြောပြီ ဗွီဒီယိုရုပ်သံ
စကစရဲ့လုပ်ရပ်ကို ကမ္ဘာသိအောင်ပြောပြီ ဗွီဒီယိုဖိုင်
သရုပ်ဆောင်အိန္ဒြာကျော်ဇင်ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲ နောက်ဆုံးတင်ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်